“လူကွီးမိဘမြားလုံးဝကြျောမသှားပါနဲကလေးတှအေသကျနဲဆိုငျလို့ပါ” - Barnyar Barnyar
လူကွီးမိဘမြား လုံးဝကြျောမသှားပါနဲ ကလေးတှေ အသကျနဲ ဆိုငျလို့ပါ တဈရကျတညျးမှာ ဖွဈပကျြသှားတယျ မနကျပိုငျးကလေးဆေးခနျး နငျ့ကို ငါလုပျမိတော့မယျ ကလေးအဖကေ သူ့မိနျမကို ကွိမျးမောငျးနတော ကလေးနှာခေါငျးထဲ ပွောငျးဖူးစေ့ ဝငျသှားတာကို သူ့မိနျမ ကလေးကို ဂရုမစိုကျလို့ ဖွဈရတာဆိုပွီး ဒေါသတှထှေကျနလေို့ တျောတျော ဖြောငျးဖယြူရတယျ
ကနြျောရှငျးပွတယျ 1. နှာခေါငျးထဲက ပွောငျးဖူးစကေို့ ဆေးခနျးမှာ ကွိုးစားထုတျကွညျ့မယျ မရရငျ 2. ဆေးရုံမှာ အိပျဆေးပေးပွီး ထုတျမယျ မရရငျ 3. နား၊ နှာခေါငျး၊ လညျခြောငျးအထူးကု ဆရာဝနျဒေါကျတာမောငျမောငျသနျးရှိတဲ့ ကြိုငျးတုံ (မိုငျတဈရာခနျ့ဝေး) သှားမှ ရမယျလို ဆေးခနျးမှာ ထုတျဖို့ ကွိုးစားတယျ ကံဆိုးတယျ မရဘူး ဆေးရုံချေါသှားရတယျ
ဆေးရုံမှာ အိပျဆေး ထိုးပွီး ထုတျတယျ ကံကောငျးတယျ။ ပွောငျးဖူးစထှေ့ကျသှားတယျ အခုမှ စိတျအေးရတယျဗြာ ကြိုငျးတုံသှားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နျောဆရာ ဟုတျတယျ မသှားရတော့ဘူး နောကျ မဖွဈအောငျ ကလေးကို ဂရုစိုကျပေါ့
ဟုတျကဲ့ ဆရာ ကြေးဇူးအရမျးတငျတယျနျောဆရာ ဟုတျပါပွီဗြာ အဲဒီနညေ့နပေိုငျး ဆေးရုံကနေ ဖုနျးဆကျလာတယျ ဆရာရေ ကလေးတဈယောကျ ဆေးရုံလာတကျတယျ ဘာကစျေ့လဲ လဖေနျြးနတေဲ့ သူ့အဖှားလိမျးဖို့ ဝယျလာတဲ့ တိုငျးရငျးဆေးရညျကို မှားသောကျမိလို့ ဆေးရုံသှားကွညျ့ရပွနျတယျ
သောကျမိတဲ့ဆေး ကွညျ့လိုကျတော့ အိမျမှာ ဖျောစပျထားတဲ့ပုံစံ။ တံဆိပျမပါ။ ဘယျလို ဖျောစပျထားတာလဲ မသိရ။ ပုလငျးကို နမျးကွညျ့တော့ ဟ အရကျနံ့ ရတယျ။ စိတျထဲမှာတော့ မှားသောကျမိတဲ့ ဆေးထဲ အရကျမြားမြား ပါပါစလေို့ ကြိတျပွီး ဆုတောငျးရတယျ
ဟုတျတယျလေ အရကျခညျြးပဲ သောကျမိရငျတောငျ အခြိနျတနျရငျ ပွနျကောငျးလာမှာ စောငျ့ကွညျ့ရုံပဲ အခုတော့ ဘာတှပေါမှနျး မသိတော့ အရိပျတကွညျ့ကွညျ့ စောငျ့ကွညျ့ပွီး ကုသမှုပေးရတာပ ကလေးကံကောငျးပါတယျ ဆေးရုံမှာ သုံးရကျနတေော့ တျောတျောကောငျးသှားလို့ ဆငျ့ခှငျ့ပေးလိုကျပွီ။
မိဘတှကေို မှာရပွနျတယျ ကလေးကို နောကျဒါမြိုး မဖွဈအောငျ သခြောဂရုစိုကျကွပါဗြ အဲဒီနညေ့ပိုငျးပုဂ်ဂလိကဆေးရုံက ဖုနျးဝငျလာတယျ ဆရာရေ သုံးနှဈသားကလေးတဈယောကျ cefixime 200mgလေးလုံး (800mg) သောကျမိလို့ အငျလုပျပွနျပွီ ဒီနကေံ့မကောငျးပါလား cefixime ကပိုးသတျဆေး(antibiotic) သူ့အရှယျနဲ့ဆို သောကျသငျ့တာထကျ ခွောကျဆလောကျ ပိုပွီးသောကျမိတယျ။
အန်တရာယျ အရမျးမြားတယျ မိဘတှကေမှားသာကျပွီး နာရီဝကျအတှငျး ခကျြခငျြး ဆေးရုံရောကျလာတော့ အစာအိမျထဲကဆေးကို ရသမြှ ဆေးကွောထုတျ (gastric lavage) လုပျ၊ အနီးကပျစောငျ့ကွညျ့ ကုသပွီးကောငျးသှာတယျ
သံခြောငျးတို့အဖကေံကောငျးလို့ မသပေေါ့ဗြာ မိဘတှကေိုမှာရပွနျတယျ နောကျထပျ ဒါမြိုးမဖွဈအောငျ ဆေးတှကေို ကလေးတှေ လကျလှမျးမမီတဲ့ နရောမှာ သခြောထားရတယျ နောကျသခြောဂရုစိုကျဗြ မောတယျဗြာမိဘတှမှောရတာ နောကျဒါမြိုးဖွဈတာတှေ နညျးအောငျလို့ သတိပေးလိုကျပါရဲ့ဗြာ
Credit to ဒေါကျတာကြျောစှာမွငျ့ (ကလေးအထူးကု)
လူကြီးမိဘများ လုံးဝကျော်မသွားပါနဲ ကလေးတွေ အသက်နဲ ဆိုင်လို့ပါ တစ်ရက်တည်းမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတယ် မနက်ပိုင်းကလေးဆေးခန်း နင့်ကို ငါလုပ်မိတော့မယ် ကလေးအဖေက သူ့မိန်မကို ကြိမ်းမောင်းနေတာ ကလေးနှာခေါင်းထဲ ပြောင်းဖူးစေ့ ဝင်သွားတာကို သူ့မိန်မ ကလေးကို ဂရုမစိုက်လို့ ဖြစ်ရတာဆိုပြီး ဒေါသတွေထွက်နေလို့ တော်တော် ဖျောင်းဖျယူရတယ်
ကျနော်ရှင်းပြတယ် 1. နှာခေါင်းထဲက ပြောင်းဖူးစေ့ကို ဆေးခန်းမှာ ကြိုးစားထုတ်ကြည့်မယ် မရရင် 2. ဆေးရုံမှာ အိပ်ဆေးပေးပြီး ထုတ်မယ် မရရင် 3. နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကု ဆရာဝန်ဒေါက်တာမောင်မောင်သန်းရှိတဲ့ ကျိုင်းတုံ (မိုင်တစ်ရာခန့်ဝေး) သွားမှ ရမယ်လို ဆေးခန်းမှာ ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ကံဆိုးတယ် မရဘူး ဆေးရုံခေါ်သွားရတယ်
ဆေးရုံမှာ အိပ်ဆေး ထိုးပြီး ထုတ်တယ် ကံကောင်းတယ်။ ပြောင်းဖူးစေ့ထွက်သွားတယ် အခုမှ စိတ်အေးရတယ်ဗျာ ကျိုင်းတုံသွားစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာ ဟုတ်တယ် မသွားရတော့ဘူး နောက် မဖြစ်အောင် ကလေးကို ဂရုစိုက်ပေါ့
ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်နော်ဆရာ ဟုတ်ပါပြီဗျာ အဲဒီနေ့ညနေပိုင်း ဆေးရုံကနေ ဖုန်းဆက်လာတယ် ဆရာရေ ကလေးတစ်ယောက် ဆေးရုံလာတက်တယ် ဘာကေ့စ်လဲ လေဖျန်းနေတဲ့ သူ့အဖွားလိမ်းဖို့ ဝယ်လာတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးရည်ကို မှားသောက်မိလို့ ဆေးရုံသွားကြည့်ရပြန်တယ်
သောက်မိတဲ့ဆေး ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်မှာ ဖော်စပ်ထားတဲ့ပုံစံ။ တံဆိပ်မပါ။ ဘယ်လို ဖော်စပ်ထားတာလဲ မသိရ။ ပုလင်းကို နမ်းကြည့်တော့ ဟ အရက်နံ့ ရတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ မှားသောက်မိတဲ့ ဆေးထဲ အရက်များများ ပါပါစေလို့ ကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းရတယ်
ဟုတ်တယ်လေ အရက်ချည်းပဲ သောက်မိရင်တောင် အချိန်တန်ရင် ပြန်ကောင်းလာမှာ စောင့်ကြည့်ရုံပဲ အခုတော့ ဘာတွေပါမှန်း မသိတော့ အရိပ်တကြည့်ကြည့် စောင့်ကြည့်ပြီး ကုသမှုပေးရတာပ ကလေးကံကောင်းပါတယ် ဆေးရုံမှာ သုံးရက်နေတော့ တော်တော်ကောင်းသွားလို့ ဆင့်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီ။
မိဘတွေကို မှာရပြန်တယ် ကလေးကို နောက်ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် သေချာဂရုစိုက်ကြပါဗျ အဲဒီနေ့ညပိုင်းပုဂ္ဂလိကဆေးရုံက ဖုန်းဝင်လာတယ် ဆရာရေ သုံးနှစ်သားကလေးတစ်ယောက် cefixime 200mgလေးလုံး (800mg) သောက်မိလို့ အင်လုပ်ပြန်ပြီ ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား cefixime ကပိုးသတ်ဆေး(antibiotic) သူ့အရွယ်နဲ့ဆို သောက်သင့်တာထက် ခြောက်ဆလောက် ပိုပြီးသောက်မိတယ်။
အန္တရာယ် အရမ်းများတယ် မိဘတွေကမှားသာက်ပြီး နာရီဝက်အတွင်း ချက်ချင်း ဆေးရုံရောက်လာတော့ အစာအိမ်ထဲကဆေးကို ရသမျှ ဆေးကြောထုတ် (gastric lavage) လုပ်၊ အနီးကပ်စောင့်ကြည့် ကုသပြီးကောင်းသွာတယ်
သံချောင်းတို့အဖေကံကောင်းလို့ မသေပေါ့ဗျာ မိဘတွေကိုမှာရပြန်တယ် နောက်ထပ် ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် ဆေးတွေကို ကလေးတွေ လက်လှမ်းမမီတဲ့ နေရာမှာ သေချာထားရတယ် နောက်သေချာဂရုစိုက်ဗျ မောတယ်ဗျာမိဘတွေမှာရတာ နောက်ဒါမျိုးဖြစ်တာတွေ နည်းအောင်လို့ သတိပေးလိုက်ပါရဲ့ဗျာ